မြန်မာအစိုးရက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့အခြေစိုက် Podesta Group ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကို သူတို့ကိုယ်စားနိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ နားချစည်းရုံးရေးလုပ်ပေးဖို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ သိန်း ၄ သောင်းနဲ့ တစ်နှစ်စာ ငှားရမ်းစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်လို့ The Hill သတင်းစာမှာမနေ့က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ မြန်မာအစိုးရက အမေရိကန်အခြေစိုက်အဖွဲ့ကို အလုပ်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေက အလွန်အရေးပါပြီး မမျှော်လင့်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ အများကြီးပေါ်လာနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် Podesta လိုနာမည်ကြီးအဖွဲ့တစ်ခုကိုငှားရမ်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံဟောင်း မစ္စပရစ်စီလာကလက် Priscilla Clapp ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းကို ထိုးဖောက်ဖို့အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ပါပဲလို့လည်း သူက သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။
အခုငှားရမ်းတဲ့ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ကို မြန်မာအစိုးရက သုံးလတစ်ကြိမ် ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းတစ်သောင်းပေးရမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အကြံပေး အဖွဲ့ ပေးတဲ့ အကြံညာဏ် တော်တော် များများကို လက်မခံပါဘူး။ အဲဒီ အဖွဲ့ကို သူတို့ တစားခံ လုပ်ခြင်တော့မှ ချသုံးတာပါ။ တကယ်တန်းကျတော့ အကြံညာဏ် ကို လက်ခံ ခြင် လို့ ခေါ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး ဆန့်ကျင်ဘက် နိုင်ငံရေးပါတီ ဘက် ရောက်မသွားအောင်ရယ် ဘက်ပြောင်းသွားရင် သာကူးလို့ ပြောလို့ရအောင် ခေါ်ထားတာ။
Apr 18, 2015 08:02 PM
၁) ကွန်မြူနစ် ကို မတရားသင်း ကြေငြာထားတာလဲ သူတို့ပဲ။ ကွန်မြူနစ်စံနစ် ကို တစ်ဖက်လက်နဲ့ အသွင်ပြောင်းပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ဆိုပြီး ကွန်မြူနစ်စံနစ် ကို ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးတာလဲသူတို့ပဲ။ ၂) ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ပြည်သူ ကို ကွန်မြူနစ် တွေလို့ စွပ်စွဲပြီး ကိုယ်တိုင်က တရုပ် ရုရှား မ/ကိုရီးယား စတဲ့ ကွန်မြူနစ် နိုင်ငံတွေ နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ပြည်သူကို နှိပ်စက်နေတာလဲ သူတို့ပဲ (နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးအရ ရိုးရိုး ဆက်ဆံတာ ကိုမဆိုလို)။ ၃) ကျောင်းသား ပြည်သူ ကို အကြမ်းဖက် တယ်လို့ စွပ်စွဲ ပြီး တကယ်တန်း အကြမ်းဖက်တာကလဲ သူ တို့ ပဲ။ ၄) ပြည်သူ့ အာဏာ ကို မူရင်းပိုင်ရှင် ထံပြန်အပ်မဲ့ ဒေါ်စု ကို အာဏာမက်တဲ့ သူအနေနဲ့ စွပ်စွဲ ပြီး တကယ်တန်း အာဏာကို မတရားသဖြင့် ဇွတ်အတင်းယူထားတာလဲ သူတို့ ပဲ။ ၅) ဒေါ်စု ကို မွတ်စု လို့ စွပ်စွဲ ပြီး တကယ်တန်းကျတော့ တရုပ် ကုလား ကို သွင်းခဲ့တာလဲ သူတို့ပဲ။
Apr 18, 2015 07:39 PM
ငွေပေး လာဘ်ထိုးပြီး လိမ်ခိုင်းတာများ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေတယ်။ တော်လို့ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေတာမဟုတ်ဘူး ပြည်သူတတ်ဆင် ပေးထားတဲ့ လက်နက် နဲ့ အာဏာ ကို တလွဲ သုံးပြီး ဗိုလ်ကျ စိုးမိုး နေတာ။
Apr 18, 2015 07:36 PM
Why podesta group... try to cover the faults of Myanmar government. Fools.
တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကြွယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ သမတကြီးကိုယ်တိုင်က အကြံပေးအဖွဲ့တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးလုပ်တာ ကိုယ်ဉာဏ ်မမီတဲ့ အကြောင်းတွေရှိမယ်။ ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပြောမနေကြနဲ့ မင်းတို့ထက်တော ်လို့ တိုင်းပြည ်အုပ်ခ ျုပ်နေတာ။
Apr 18, 2015 08:36 AM
နေရပ်- သမဒ ရဲ႕ ***ကို စား
သမဒ ရဲ့ ***ကို စား ဆို ရင် စားမယ် ဆိုတဲ့ လူ တွေ ပါ လား